Voasakana tao Shina ny Wikipedia · Global Voices teny Malagasy
Voasakana tao Shina ny Wikipedia
Voadika ny 06 Novambra 2018 7:48 GMT
Voasakana tany amin'ny faritra maro tany Shina tamin'ny volana Oktobra 2005 ny .Wikipedia, rakibolana an-tserasera maimaim-poana mifototra amin'ny fiaraha-miasa sy ny fandraisana anjara.
Tao amin'ny pejin'ny Wikipedia amin'ny teny Shinoa, nisy ny teny nilaza fa : ” Nanana olana vonjimaika tamin'ny fidirana noho ny antony tsy voamarina ny mpisera sasany ao Shina tanibe”. Nangataka ireo mpisera ihany koa izy izay afaka nitsidika ilay pejy mba hitatitra ny faritra misy azy sy ny mpanome tolotra aterineto mba ahafahana mahafantatra bebe kokoa ny toe-draharaha.
Nanamarika i Anti fa tena mahatsikaiky ity fanakanana ity hatramin'ny namoahan'ny governemanta Shinoa ho an'ny vahoaka ny “ Taratasy Fotsy momba ny Demokrasia ao Shina “. Nihevitra i Widao fa ny taratasy fotsy no antony nahatonga ny fanakanana.
Tsy vao voalohany no voasakana ny Wikipedia. Tamin'ny volana Jona sy Septambra 2004 dia nosakanana nandritra ny fotoana maromaro ny Wikipedia, noho ny votoatiny saropady ara-politika tahaka ny Hetsi-panoherana tao amin'ny Kianjan'i Tiananmen tamin'ny taona 1989 .